Listings in အလုပ်သမားရုံးများ and စက်ယန္တရားကြီးများ | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
Listings in အလုပ်သမားရုံးများ and စက်ယန္တရားကြီးများ
အမှတ် နန-၃/၇၃၊ ၆ရလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ စံပြလမ်း(၁၃၃)နှင့်မင်္ဂလာလမ်း(၁၃၂)လမ်း၊,
အမှတ် နန-၃/၇၃၊ ၆ရလမ်း၊ စံပြလမ်း နှင့် မင်္ဂလာလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊, ,
**မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန
၈၃လမ်း၊ ၂၃လမ်း နှင့် ၂၄လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
**မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အလုပ်သမားရေးရာ ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန
၆၅လမ်း၊ အေးမေတ္တာလမ်း ထောင့်၊ ဆ-ရပ်ကွက်၊, ,
in ကားအငှားလုပ်ငန်းများ, ဆောက်လုပ်ရေး၊ကန်ထရိုက်တာ လုပ်ငန်းသုံးစက်ကိရိယာများ, ကရိန်းအငှား, စက်ယန္တရားကြီးများ
၆၂လမ်း၊ အေးသုခလမ်း နှင့် ရတနာလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊, ,
09-786500110 , 09-795001100
(၇၈)လမ်း၊ သီတာအေး၊ ချမ်းမြသာစည်တောင်၊, ,
အမှတ် ပပ-၈/၉၊ ၆၄လမ်း၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်း ကြား၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-420088252 , 09-970686266
အမှတ် ဒီ-၂-အေ၊ ၆၂-စက်မှုပန်းခြံလမ်း၊ င-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5154597 , 09-2030045
in စက်ယန္တရားကြီးများ, စက်နှင့် စက်အပိုပစ္စည်း, သတ္ထုတူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီများ
Aung Emerald Co., Ltd.
အမှတ် ၅၉၄/၂၂၂၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ တံခွန်တိုင်၊, ,
02-5154651 , 09-91005770
in ဆောက်လုပ်ရေး၊ကန်ထရိုက်တာ လုပ်ငန်းသုံးစက်ကိရိယာများ, စက်ယန္တရားကြီးများ, စက်နှင့် စက်အပိုပစ္စည်း
အမှတ် န-၇/၈၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ကျွဲဆည်ကန်(၁)လမ်း နှင့် ကျွဲဆည်ကန်(၂)လမ်း ကြား၊,
in ကားပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများ, အင်ဂျင်အမျိုးမျိုးပြုပြင်ရေး, စက်ယန္တရားကြီးများ
မြစ်ငယ်မီးရထားတွဲပြင်စက်ရုံမြောက်ဘက်၊ ယဉ်တော်စံရွာ၊, ,
09-964008396 , 09-400008396
in မီးစက်၊ထရန်စဖော်မာ ပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရေး၊ အငှား, စက်ယန္တရားကြီးများ, စက်နှင့် စက်အပိုပစ္စည်း
အမှတ် ဆ-၉/၂၂၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း နှင့် ဂေါ်သဇင်လမ်း ကြား၊ ၇၂လမ်း နှင့် ၇၃လမ်း ကြား၊, ,
09-2021834 , 09-692021834
09-2021834, 09-692021834, 09-798661567
Asia Tractors Family Co.,Ltd.
ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ယာတော်၊, ,
09-5333787 , 09-43090077
09-5333787, 09-43090077, 09-450049545
in ဆောက်လုပ်ရေး၊ကန်ထရိုက်တာ လုပ်ငန်းသုံးစက်ကိရိယာများ, မီးစက်၊ထရန်စဖော်မာ ပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရေး၊ အငှား, စက်ယန္တရားကြီးများ
Asia Trade & Commerce Co.,Ltd. [ATC] [RMA Group]
in ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ, စက်ယန္တရားကြီးများ
Aung Chan Thar Construction & Services Co.,Ltd.
အမှတ် ၅၄/အေ၊ ကမ႓ာအေးဘုရားလမ်း၊, ,
01-657066 , 01-657067
01-657066, 01-657067, 09-428218800
02-5154651, 09-91005770, 09-5177796